हाम्रो क्रिसमस लेबलहरूको लागि मूल विचारहरू क्रिएटिव अनलाइन
ती मितिहरूमा छन् विवरण धेरै मूल्यवान छ, र हामी सबै दुवैले प्राप्त गर्न र हाम्रो प्रियजनहरूलाई उपहार दिन उत्साहित छौं। त्यहाँ छन् क्रिसमसको धेरै विशिष्ट छवि, र त्यो हो जब तपाईं भोजन कक्षमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र फेला पार्नुहुन्छ उपहारले भरिएको। बच्चाहरू यस क्षणको लागि सबै वर्षको लागि प्रतीक्षा गर्दछन्। को लागी फरक पार्नुहोस् जसको उपहार प्रत्येक छ, वा केवल को लागी प्रस्तुत गर्नुहोस् धेरै धेरै सुन्दर तरिकामा हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँ पढिरहनुहोस्।
सबै तत्वहरूलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। हामी केही प्रस्ताव गर्दछौं रचनात्मक विचारहरू तपाइँको अनुकूलन गर्न लेबलहरू। त्यहाँ सबै प्रकारका छन्, र हामी तपाईंलाई आश्वासन दिन्छौं कि यसले तपाईंलाई एक दिन्छ धेरै विशेष स्पर्श.
1 टाँसिएको नोटहरूको साथ निजीकृत लेबलहरू
2 फोटो सहित लेबल
3 मोतीका साथ कार्डबोर्ड लेबलहरू
4 कपडा स्क्र्यापको साथ कार्डबोर्ड लेबलहरू
5 पारदर्शी बलहरू
6 नाम पत्र लेख्ने तकनीकको साथ लेखिएको
7 क्रिष्टमस लेबलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
8 अक्षरको साथ टिकटहरू
9 काठको कपडाको प्यान्स
टाँसिएको नोटहरूको साथ निजीकृत लेबलहरू
तपाईंले लेबलहरू बनाउन सुरु गर्नु अघि, तपाईंले सोच्नु पर्छ कि कसलाई सम्बोधन गरिएको छ र प्रत्येक स्थितिमा तपाइँको डिजाइन अनुकूल गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं भोजन बच्चाहरु को लागी बिभिन्न बच्चाहरु को लागी उपहार भर्न छ, तपाईं सक्नुहुन्छ प्रत्येक उपहार चिन्न रंग प्रयोग गर्नुहोस्। हामी पनि एक प्राप्त गर्नेछौं दृश्य प्रभाव धेरै राम्रो। रंगीन उपहारहरूले भरिएको भोजन कक्षको कल्पना गर्नुहोस्: निलो, गुलाबी, हरियो, रातो, सुन्तला। प्रत्येक र color्ग फरक व्यक्तिको हुन सक्छ। यो प्रभाव प्राप्त गर्न हामी टाँस्न सक्छौं रंगीन स्टिकी नोटहरू। तिनीहरू सस्तो र गोंद गर्न सजिलो छन्।
तपाईले यो तथ्यको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ कि तिनीहरु व्यक्तिहरु लाई उनीहरुसंग जो उनीहरु लाई दिन्छन्। तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन्, र हामी हामीले छनौट गरेका छौं तपाईलाई प्रेरणा दिन वा हामी तपाईंलाई देखाउने केही विचारहरूको पुन: उत्पादन गर्नका लागि।
फोटो सहित लेबल
एक राम्रो विकल्प, जुन हामी सँधै ध्यानमा राख्दैनौं, सिर्जना गर्नु हो फोटोहरू प्रयोग गरेर लेबलहरू। हामी जहिले पनि प्राप्तकर्ताको नाम लेख्नु पर्ने शीर्षकमा पर्दछौं, तर उनीहरूले भने जस्तै "एक चित्र एक हजार शब्दको लायक छ"। थप रूपमा, यो एक लेबल हो जुन अर्को उपहारको रूपमा राख्न सकिन्छ। तपाईं फोटोमा टेप गर्न सक्नुहुनेछ, वा गिफ्टको वरिपरि स्ट्रि w र कपडाको कपडाले यसलाई झुन्ड्याउन सक्नुहुन्छ।
यो रमाईलो हुन सक्छ पुराना फोटोग्राफहरू खोज्नुहोस्, हास्यास्पद वा हामीलाई सम्झाउनुहोस् राम्रो क्षण उसको छेउमा
मोतीका साथ कार्डबोर्ड लेबलहरू
जे होस् गत्ता लेबल प्रभावकारी हुन सक्छ, हामी यसलाई धेरै राम्रो स्पर्श दिन सक्छौं यदि हामी फरक प्रयोग गर्छौं मोती पुन: सिर्जना गर्न क्रिसमस वर्णहरू.
यदि तपाईंले छविमा हेर्नुभयो भने, त्यहाँ धेरै विकल्पहरू र यस प्रभावलाई सिर्जना गर्ने तरिकाहरू छन्। उदाहरण को लागी, हिममानव टाँस्न प्राप्त गर्न सकिन्छ तीन सेतो बटन। यदि हामी बटनमा नै प्वालहरू हेर्छौं भने, तलको, जुन सबैभन्दा ठूलो हो, चार प्वाल हुन्छ र बाँकी दुई मात्र। बीचमा ती हामीलाई सम्झना दिलाउँछन् टी-शर्ट बटनहरू, र ती माथि आँखाहरु। मार्करको साथ हामी अन्तिम टच दिन्छौं। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि पहिलो तत्वहरू कोर्नुहोस् र पछि बटनहरू स्टिक गर्नुहोस्। अर्को प्राप्त गर्न को लागी अर्को सजिलो तरीका हिममानव यो बाट छ कटन बलहरू.
कपडा स्क्र्यापको साथ कार्डबोर्ड लेबलहरू
बाक्लो सामग्रीमा बढ्दै, हामी अप्ट इन गर्न सक्दछौं कागजबोर्ड। हामी अधिक प्राप्त गर्नेछौं दृढता y प्रतिरोध। पहिलो चरण भनेको कार्डबोर्डलाई त्यो आकारमा काट्नु हो जुन हामी सब भन्दा बढि चाहान्छौं। सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको आयताकार आकारहरू। एक पटक काँटछाँट गरेपछि हामी प्रयोग गर्ने छौं क्रिसमस पैटर्न संग कपडा तिनीहरूलाई विशेष स्पर्श दिन। हामी तिनीहरूलाई कुनै पनिमा फेला पार्न सक्छौं सिलाई पसल.
Para कार्डबोर्डमा कपडा गोंद, उत्तम विकल्प प्रयोग गर्नु हो सेतो गोंद o सम्पर्क गोंद। हामी तपाईंलाई केही विचारहरूको साथ तपाईंलाई प्रेरणा दिन छोड्दछौं।
यी लामो समयदेखि फेसनमा छन् क्रिसमस बलहरू पुरा तरिकाले पारदर्शी। तिनीहरूलाई रूखमा वा डोर्कनबमा झुण्ड्याउनुको सट्टा, हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं ट्याग हाम्रो उपहार सक्छ भित्र भर्नुहोस् con कागजात लेखन संग nombre व्यक्तिको
नाम पत्र लेख्ने तकनीकको साथ लेखिएको
को प्रविधिको अक्षर यो सुलेख भन्दा पर जानको मिल्छ, यो लेखन र चित्रकला, सजावट वा अक्षरको साथ आकार सिर्जना बीचको मिश्रण हो। यसैले, यो भन्न सकिन्छ कि यो छ चिठी संग चित्र को कला.
Se अक्षरहरू परिमार्जन गर्नुहोस् र तीनिहरु लाई अधिक सुन्दर बनाउन को लागी उचित आकारका छन्। यो कुनै लेखन सामग्रीको साथ गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, ब्रश संग, मार्करहरु (विभिन्न मोटाई को), कलमहरु, अन्यहरु संग। हामी तपाईंलाई एउटामा लिंक दिन्छौं लिङ्क हामीलाई प्रदर्शन गर्न सिकाउने धेरै रोचक अक्षर आधार बाट।
क्रिष्टमस लेबलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
समय छैन यसको मतलब यो होइन कि हामीसँग छ इस्तीफा राम्रो प्रस्तुतीकरणमा। समाधान जुन हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं क्रिष्टमस लेबलहरू डाउनलोड गर्नुहोस् ताकि तपाईं केवल तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्नु पर्छ। धेरै जसोसँग नाम लेख्न ठाउँ छ। हामी तपाईंलाई केहि देखाउँदछौं लिंकहरू कहाँ डाउनलोड गर्न यी लेबलहरू जुन तपाईंको उपहारलाई रंग दिन्छन् पूर्णतया स्वतन्त्र छन्।
अक्षरको साथ टिकटहरू
अर्को विकल्प जुन हामीलाई अनुमति दिनेछ धेरै समय बचत गर्नुहोस् प्रयोग गर्नु हो पत्र टिकटहरू। हामी एक किन्न सक्छौं किरा सबै संग वर्णमाला र मसीले जानुहोस् र इच्छित नाम नबढुन्जेल अक्षरहरू स्ट्याम्प गर्नुहोस्।
यो विकल्प पनि छ सिफारिस गरिएको ती को लागी उनीहरूसँग राम्रो हस्तलेखन छैन र तिनीहरू कारीगर लेबल बनाउन छोड्दैनन्। यसमा टाइप गरिएको नामको साथ पृष्ठ प्रिन्ट गर्न प्रलोभनमा नपर्नुहोस्।
काठको कपडाको प्यान्स
यो विचार वास्तवमै मौलिक छ र हाम्रो उपहारलाई एक धेरै राम्रो स्पर्श दिन्छ। विचार हो काठको कपडामा लेख्नुहोस् उपहार सम्बोधन गरिएको व्यक्तिको नाम। क्ल्याम्प सजाउन हामी संसाधनहरूको एक विस्तृत श्रृंखला को उपयोग गर्न सक्छौं।
पोडेमोस पेगाकुनै पनि वस्तु, दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि यो छ भने प्लेनो यो राम्रोसँग समात्न सजिलो हुनेछ। हामी क्रिसमस वर्ण वा सम्बन्ध सन्दर्भ। हामी तपाईंलाई ए छविहरूको सेट ताकि तपाईं अधिक सजीलो बुझ्न सक्नुहुनेछ अवधारणा हामी सन्दर्भित जो।
यदि तपाईं फाइदा लिन चाहानुहुन्छ भने पुरानो न nailsहरू पेन्ट गर्नुहोस् तपाईको घरमा रहेको एउटा सरल तरीका हो क्यालिपर पेन्ट गर्नुहोस् विभिन्न र colors्गहरूको। को परिणाम राम्रो छ र तपाईं घर फोहोर छैन। यदि तपाईं स्प्रे प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाई कुनै चीजलाई दाग नलगाउन एकदम सावधान हुनुपर्दछ, किनकि रंग भने जताततै फैलिएको छ, गन्धको साथै यसले छोडिन्छ।
साथै, यदि हामीसँग धेरै समय वा सीप छैन, हामी सक्दछौं क्रिसमस मोटिफको साथ कपडपिनहरू खरीद गर्नुहोस् र हामीले केवल मार्करको साथ नाम लेख्नुपर्नेछ। यसमा लिङ्क तपाईं अनलाइन स्टोरहरू फेला पार्नुहुनेछ जहाँ क्रिसमस वस्त्रपिनहरू किन्नुहोस् सस्तो मूल्यमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » क्रिसमस उपहारहरू लेबलिंगको लागि मूल विचारहरू